सबै भन्दा कडा एन्टीडिप्रेससन्ट: Tianeptine सोडियम
Tianeptine सोडियम के हो
Tianeptine सोडियम एक औषधि हो जुन प्रयोगकर्ताहरू डिप्रेसन प्रबन्ध गर्न प्रयोग गर्दछ। यद्यपि खाद्य तथा औषधि प्रशासन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकामा औषधि प्रयोग गर्नका लागि अनुमोदन हुन बाँकी नै छ, तर यो एक शक्तिशाली एन्टीप्रेससन्ट साबित भएको छ। बिक्रीको लागि टियान्ट्पाइन सोडियम विभिन्न अनलाइन स्टोरहरूमा सजिलैसँग उपलब्ध छ, र तपाईं जहिले पनि तपाईंको घर वा कार्यालयको सुविधाबाट तपाईंको अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ।
Tianeptine सोडियम अनलाइन किन्न को्यासियल, Stablon, र Tatinol रूपमा विभिन्न ब्रान्ड नाम अन्तर्गत बिभिन्न देशहरुमा बेचिन्छ। तपाईंको राज्यमा निर्भर रहँदै, तपाईं यसलाई यो लेखमा उल्लेख गरिएकोबाट एकदम असामान्य नाममा बेच्न सक्नुहुनेछ। वर्षौंको दौडान संयुक्त राज्य अमेरिकामा लागूपदार्थको दुरुपयोगको चिन्ताले थुप्रै प्रयोगकर्ताहरूलाई गम्भीर साइड इफेक्टमा पार्दै आएको छ। जहाँसम्म, हामी जहिले पनि हाम्रा सबै ग्राहकहरूलाई टियानिप्टिन सोडियम नलिन सल्लाह दिन्छौं (30123-17-2) एक मेडिकल परीक्षण बिना नै खुराक।
जति तपाईं सजिलैसँग औषधि किन्न सक्नुहुन्छ, मेडिकल प्रोफेशनलबाट सही प्रिस्क्रिप्सन लिएर कुनै पनि औषधी लिई तपाईंको स्वास्थ्यलाई जोखिममा नपार्नुहोस्। अधिकांश tianeptine सोडियम किन्न अनलाइन निर्माताहरूले तपाइँ ड्रग कसरी लिनु पर्छ भन्ने संकेत गर्दछ। यद्यपि कहिलेकाँही प्याकमा दिइने डोजले तपाईंलाई काम नगर्न सक्दछ। मानव शरीर प्रणाली फरक छन्, र तपाईंलाई चाहिने लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न तपाईंलाई कम वा उच्च खुराक चाहिन सक्छ। अत्यधिक Tianeptine सोडियम खुराक लिनाले तपाईंको स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्छ र गम्भीर साइड इफेक्ट हुन सक्छ। त्यसकारण, टियानिप्टेडिन सोडियम खुराक लिँदा सधैं डाक्टरको मार्गदर्शन खोज्नुहोस्।
फ्रान्समा १ 1960 s० को दशकमा फ्रान्सेली सोसाइटी अफ मेडिकल रिसर्चले यो पेटेन्ट गरेको थियो र पत्ता लगाएको थियो, जहाँ यो अनुमोदन, निर्माण, र प्रयोगशालामा मार्केटि। पनि गरिएको थियो। यो अन्य यूरोपीय देशहरूमा पनि ब्राण्ड नाम कोआक्सियल, र टाटिनोल र ल्याटिन अमेरिकामा स्ट्याब्लोन अन्तर्गत बेचिन्छ। जे होस्, यो सजिलै संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र न्यूजील्याण्डमा उपलब्ध छैन। तथापि, आज, तपाईं सजीलै गर्न सक्नुहुन्छ Tianeptine सोडियम किन्नुहोस् Reddit र लाभहरूको मजा लिनुहोस्।
Tianeptine सोडियम कसरी काम गर्दछ?
यो कार्यको tianeptine संयन्त्र धेरै रोचक छ। यो एक रासायनिक कम्पोनेन्ट हो कि एक नौसिखिए न्यूरो रसायन प्रोफाइल छ। ड्रगले दिमागमा सेरोटोनिनको उपभोग बढाउँदछ (अन्य एन्टीडिप्रेसस एजेन्टहरू जस्तो नभई) तब तनाव-प्रेरित न्यूरोनल एट्रोफी डेन्ड्राइट्स कम हुन्छ। यो प्रतिकूल साइकोमोटर, संज्ञानात्मक, हृदय, शरीरका तौल, वा निद्रा प्रभावहरूसँग सम्बन्धित छैन, अन्य ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसन्ट एजेन्टहरू जस्तो। योसँग कम दुरुपयोग गर्ने क्षमता पनि छ। यो एक अनुकूल फार्माकोकिनेटिक प्रोफाइल छ र कुनै पनि पहिलो-पास हेपाटिक चयापचयको अधीनमा छैन र सीमित वितरण र उच्च जैव उपलब्धता छ।
साथै, खुराक पछि, औषधि धेरै छोटो समयमा समाप्त हुनेछ। यसले डाइजेसन, औषधि अन्तर्क्रिया, उपचार परिवर्तन, र द्रुत उन्मूलनको सम्बन्धमा अन्य tricyclic माथि tianeptine लाई माथिल्लो हात दिन्छ यसैले खुराक पालन तालिकालाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाउँदछ।
Tianeptine हेपाटिक साइटोक्रोम P450 प्रणाली द्वारा मेटाबोलिज गर्न सकिदैन, यसैले यो लाग्यो कि लागूपदार्थको अन्तर्क्रियामा लागुपदार्थको उच्च भिन्नता छ। यो बुढो व्यक्तिको लागि लाभदायक छ। Tianeptine सोडियम खुराक दिनको २ 25 देखि 50०mg सम्ममा हुन्छ। यो बिरामीहरुमा गरिएको अनुसन्धान अनुसार थियो जसले ठूलो डिप्रेसन, समायोजन डिसअर्डर, डिस्टिमिया, डिप्रेस्ड द्विध्रुवी विकारहरू थिए। टियान्टाप्टिन सोडियमको समान एन्टीडिप्रेसस प्रभावकारिता हुन्छ, त्यस्तै अन्य शास्त्रीय एजेन्टहरू जस्तै म्यानसेरिन, इमिप्रामिन, क्लोमिप्रमाइन एट अल। Tianeptine को उन्मूलन आधा जीवन Nootropic २ देखि hours घण्टा सम्म हो। यद्यपि यो उन्मूलन आधा अब बढि वयस्कमा2देखि १० घण्टा सम्म बढाइएको छ। Tianeptine अन्तर्क्रिया को अभाव त्यहाँ कुनै अस्तित्वगत अन्तर्क्रिया छन् भन्ने संकेत हुँदैन।
Tianeptine सोडियम कसरी प्रयोग गर्ने?
ड्रग मूलतया Tianeptine सोडियम (30123०१२17-१-2-२) क्याप्सुल र पाउडरको रूपमा छ। अधिक मात्रामा नखोज्न मौखिक टियानिप्टिन सोडियम खुराक धेरै सावधानीका साथ लिनुपर्दछ। जे होस्, सुरक्षित पक्षमा हुनको लागि, तपाइँको डाक्टरसँग नियमित जाँचको लागि तालिका बनाउनुहोस् जब तपाइँ टियान्ट्पाइन सोडियम खुराक जारी राख्नुहुन्छ। मानक खुराक १२.mmg हो जुन प्रति दिन तीन पटक लिनुपर्दछ। यद्यपि, खुराक तपाईंको चिकित्सक द्वारा समायोजित गर्न सकिन्छ, उपचार अन्तर्गत सर्तमा निर्भर गर्दछ।
जब तपाइँ एक खुराक याद गर्नुहुन्छ, औषधि लिनुहोस् जति सक्दो चाँडो तपाइँलाई याद छ, जबसम्म यो अर्को खुराकको लागि लगभग समय होईन। छुटेको खुराकको लागि कभर गर्नको लागि कहिले पनि अतिरिक्त खुराक नलगाउनुहोस्, जुन ओभरडोजि be्ग हुनेछ, जुन गम्भीर हुन सक्छ Tianeptine सोडियम साइड इफेक्ट। Tianeptine सोडियम आधा जीवन को बारे मा २. to देखि hours घण्टा छ, र यसैले यसको खुराक राम्रो परिणामको लागि एक दिनमा तीन मा विभाजित छ। अर्को तर्फ, टियान्ट्पाइन सोडियम आधा जीवन उन्मूलन 2.5 देखि hours घण्टा को लागी अनुमान गरिएको छ। यद्यपि आधा जीवन कहिलेकाँही तपाईंको शरीरको शक्ति द्वारा निर्धारण गर्न सकिन्छ। वयस्कहरूमा जस्तै, टियानप्टिन सोडियम आधा जीवन to देखि hours घण्टा बीच हुन्छ।
यहाँ tianeptine सोडियम प्रयोग गर्दछ:
1) अवसादग्रस्त लक्षणहरूको लागि
औषधि उत्कृष्ट थियो, प्रायः बिरामीहरूसँग जससँग प्रमुख डिप्रेसन मुद्दाहरू थिए। साथै, Tianeptine विस्तार उपचार रिलेपसीस घटना घट्यो साथसाथै डिप्रेसन पुनरावृत्ति। Tianeptine मा क्लिनिकल सुधार प्रस्ताव को लागी साबित भएको छ पार्किन्सन्स रोग बिरामी बिरामीहरू।
यस औषधिले निराश बिरामी सब ग्रुपको लागि असाधारण सम्भावना पनि पाउँदछ जस्तै पुरानो मदिरावाद र बुढोलाई शामक, कार्डियोभास्कुलर, र एन्टिकोलिनेर्जिक प्रतिकूल प्रभावहरूको अभावका कारण। Tianeptine भोक कम गर्न र postmenopausal महिलाहरु मा अवसादग्रस्त लक्षणहरु मा मद्दत गर्न सक्छ। जे होस्, यसले तौललाई असर गर्दैन र सबै मोटाई केसहरूको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन।
2) PTSD, तनाव र चिन्ता लक्षण
एसिटालोप्राम र टियान्टाप्टिनको ड्रग रेजिमेन्सले चिन्ताका लक्षणहरूको साथसाथै उद्देश्य र व्यक्तिपरक न्यूरो-संज्ञानात्मक कार्यहरू पनि सहयोग पुर्‍यायो। साथै, टियान्ट्पाइनले बिरामीहरूलाई आतंक चुनौतीहरू मात्र पार्ने विकारहरूलाई कम गरेको छ। यो PTSD बिरामीहरूको उपचारमा .37.5 XNUMX.mmg को एक खुराकमा पनि सक्रिय छ।
3) सुधारिएको शिक्षा र मेमोरी
यसले तर्क क्षमता, तत्काल मौखिक सम्झनाहरू, आयोग त्रुटिहरू, साथै लघु-मानसिक राज्य परीक्षामा प्रभावशाली सुधारहरू देखायो। डिप्रेसनको साथ Tianeptine यसले मौखिक तात्कालिक सम्झनाहरु र कमिशन त्रुटिहरुमा ठीक न्यूरोकग्निटिभ फंक्स्स लाई बृद्धि गर्दछ।
4) विरोधी भड़काउने प्रभाव
Tianeptine सोडियम (30123०१17-१-2-२) उच्च लेपोपोलिसेकेराइड-प्रेरित TLR4 अभिव्यक्ति साथ साथै माइक्रोग्लियल कोशिकाहरूमा भड़काउने जटिलताहरूलाई दबाउन सक्छ। Tianeptine सोडियम उच्च नुन पनि TNF-u- प्रेरित MMP-9 अभिव्यक्ति Inhiiting PI3K / Akt- मध्यस्थता NF-κB गतिविधिहरु द्वारा अभिव्यक्ति। क्यान्सर सेल आक्रमणहरू पनि रोकिए।
5) दुखाइ राहत
Tianeptine सोडियम उच्च यसको पीडा कम गर्न कार्यको संयन्त्रको प्रयोग गर्दछ। यो यस मार्फत हो:
डेल्टा-ओपियोइड र म्यू-ओपियोइड रिसेप्टर्सहरू प्रदान गर्दै जुन पीडा कम गर्दछ।
GABA सांद्रता बढाउनको साथ साथै मेरुदण्डको कर्डहरू सक्रिय पार्दै--HT5 रिसेप्टर्स यसैले न्यूरोपैथिक पीडा कम गर्दछ।
एडेनोसिन A1 रिसेप्टर्स सक्रिय गर्दै, यसले दौरा कम गर्छ र दुखाइ कम गर्दछ।
विरोधी भड़काउने प्रभावहरू मार्फत।
मेरुदण्डको पृष्ठीय सी hornमा नोरपाइनफ्रिन र सेरोटोनिनको स्तर बढाउँदै।
6) इरिटिएबल बोवेल सिन्ड्रोमहरू
सेरोटोनिनको आन्तरिक डक्ट भित्र एउटा एन्टिक नर्भस प्रणालीमा पर्याप्त भूमिका छ जहाँ यसले सम्पूर्ण पाचन आन्दोलन सामग्री साथै आन्द्राको स्रावहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ। बढेको सेरोटोनिनले उन्नत चाल र स्रावलाई सक्षम बनाउँदछ जुन IBS भएका मानिसहरूलाई पखाला, पसीना र पीडाको कारण हुन्छ।
Tianeptine सोडियम बनाम सल्फेट
Tianeptine को कार्यविधि सबै यसको रूपहरुमा लगभग समान छ। जे होस्, सल्फेट टियान्ट्पाइन सल्फेटको सुधारिएको संस्करण हो। दुई पदार्थको बिचको महत्त्वपूर्ण भिन्नता भनेको सल्फेट लवणको सोडियम भन्दा पानीको घुलनशीलता राम्रो हुन्छ। अर्कोतर्फ, सल्फेटको लामो आधा जीवन हुन्छ किनकि यो तपाईंको शरीरमा बिस्तारै समाहित हुन्छ। सोडियमको छोटो आधा जीवन हो, र तपाईंले चाहेको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न यसको डोज धेरै पटक लिनुपर्नेछ। सोडियम खुराक दिनमा3देखि times पटक लिइन्छ। Tianeptine सोडियम बनाम सल्फेट को बारे मा अधिक जानकारी को लागी, कृपया आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्नुहोस्।
Tianeptine सोडियम साइड प्रभाव
सामान्य tianeptine सोडियम खुराक औसत तौल को लागी दिनको लगभग १२ मिलीग्राम तीन पटक छ, तर अरुहरु पनि २mmg दिनको तीन चोटी जान सक्दछन्। सामान्य साइड इफेक्टमा चक्कर आउने, टाउको दुख्ने, पेट दुखाइ, कब्ज, टियानप्टिन निकासी, सपना परिवर्तन, र मतली समावेश छ। वृद्धावस्था असफल बिरामीहरू र बुढेसकालका बिरामीहरूले न्यूनतम खुराक लिन आवश्यक छ नत्र उनीहरू जटिलताबाट ग्रस्त हुनेछन्। जहिले पनि टिआनेप्टिन फिर्ताको लक्षणहरू अनुभव गर्नुभयो भने सधैं आफ्नो डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस्।
अध्ययनहरूले देखाए कि यो एन्टिडेन्ट्रेन्ट्ट कलेजो विषाक्तताको सम्भावना बढ्छ।
भावनात्मक मेमोरीको कमी
हालको अनुसन्धानले देखायो कि टिआनेप्टिन नूट्रोपिक लिने बिरामीहरू अनुहारको भावको व्याख्या गर्नमा कम सटीक भएका छन् र भावनाहरूसँग सम्बन्धित मेमोरी पनि घटाएका छन् / उनीहरूले सकारात्मक उत्तेजनासँग सम्बन्धित ध्यान कम सतर्कता पनि देखाए।
त्यहाँ Tianeptine सोडियम को लत क्षमता छ?
एक घातक tianeptine antidepressant खुराक लिन सक्छ तब अम्मत हुन सक्छ। यसले तिनीहरूलाई हल्का लत बनाउन सक्दछ त्यसैले शारीरिक र मनोवैज्ञानिक निर्भरताको कारण। यसले ओपियोड्स जस्तै यफोरिक प्रभावहरूलाई पनि निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले प्रयोगकर्ताहरूलाई नियमित रूपमा ओभरडोज लिन बाध्य पार्दछ। केहि व्यक्तिहरू केवल उच्च प्राप्त गर्न टियान्ट्पाइन मनोरन्जन लिन्छन्। मनोरञ्जनका लागि टियान्ट्पाइन सोडियम क्याप्सूल र पाउडरको दुरुपयोग गर्नाले अत्यधिक लत बनाउने छ र मर्नेछ यदि तिनीहरू फिर्ताको लक्षणबाट केही हदसम्म आराम गरेन भने।
के Tianeptine सोडियम कानूनी छ?
मिशिगन जस्ता राज्यहरूले टियान्टेप्टिन सोडियमको प्रयोगमा रोक लगाएको छ र यो अनियन्त्रित पदार्थ हो भन्दै। यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा वैध छैन तर अझै पनि विभिन्न अनलाइन स्टोरहरूबाट खरीद गर्न सकिन्छ। अमेरिकाका धेरै प्रयोगकर्ताहरू टिआनेप्टिन सोडियम ईबे अनलाइन खरीद गर्न रुचाउँदछन् किनकि त्यहाँ कुनै प्रतिबन्धहरू छैनन्, र कसैले पनि याद गर्दैन कि यदि तपाईं डाक्टरबाहेक टायनेप्टिन सोडियम क्याप्सूल हुनुहुन्छ भने। तपाईं टियान्ट्पाइन अन्तरक्रिया पनि बिभिन्न अनलाइन स्टोरहरूबाट खरीद गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं तिनीहरूलाई भौतिक फार्मेसीहरूमा फेला पार्नुहुन्न भने।
धेरै देशहरूले ल्याटिन अमेरिकीहरू र एशियाबाहेक टिएनप्टिन नूट्रोपिकलाई कानुनी मान्यता दिन सकेका छैनन्। यो यो हो किनभने भूतपूर्व देशहरूले टियान्टेप्टिन सोडियमलाई अत्यधिक रूपमा शंका गर्छन् Nootropic स्रोतहरू, एफडीएले भनेझैं जसले औषधि बनाउने कम्पनीहरूलाई चेतावनी पत्र जारी गर्‍यो। जे होस्, तपाईं टिआनेप्टिन सोडियम ईबे खरीद गर्न सक्नुहुनेछ अनलाइन स्टोरहरूबाट कुनै चुनौती बिना। यद्यपि, सावधानीको रूपमा, तपाइँ डाक्टरको निर्देशनहरू र निर्देशन अन्तर्गत टियानप्टाइन अन्तर्क्रिया लिनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्।
द्विध्रुवीय लक्षणहरू भएका बिरामीहरू जसले टियान्टप्टिन लिन्छन् उनीहरूको डिप्रेशन मापन परीक्षण स्कोर बढि खराब भयो। गर्भावस्थामा, औषधि नक्कलले अपिमेट गर्दछ त्यसैले नवजात शिथिलता सिन्ड्रोमहरूको कारण। Tianeptine अत्यधिक द्वि घातुमान वृद्धि भयो-वयस्कहरूमा पिउने व्यवहार तर वयस्कहरूले रक्सीको समग्र उपभोगलाई कम गर्‍यो।
Tianeptine सोडियम बिक्रीको लागि
पहिले नै भनिएझैं टियान्ट्पाइन सोडियम खरीद विभिन्न अनलाइन स्टोरहरू जस्तै ईबे, अन्यमा उपलब्ध छन्। यदि तपाईं बियानोमा Tianeptine सोडियम (30123०१२17-१-2-२) खरीद गर्दै हुनुहुन्छ ताकि तपाईं स्टकमा बिक्रीको लागि राख्न सक्नुहुनेछ, तब यो तपाईंको लागि सस्तो हुनेछ। तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ Tianeptine सोडियम किन्नुहोस् विश्वव्यापी डीलरहरूबाट छुट र पैसा फिर्ता प्रस्तावहरूको मज्जा लिन बल्क। अधिकांश टिआनाप्टिन सोडियम खरीदकर्ता डिलरहरूले विभिन्न भुक्तानी विधिहरू स्वीकार गर्दछन्। तपाईं क्रेडिट कार्ड वा पेपैलको साथ पनि अन्यमा टिआनेप्टिन सोडियम किन्न सक्नुहुन्छ।
Tianeptine सोडियम Reddit खरीद संग लाभ तपाईं आफ्नो घर को आराम बाट स्टक मा tianeptine सोडियम जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्नोलोजीले सबै चीजहरू सजिलो बनाएको छ, र स्टकमा टियान्टेप्टिन सोडियम जाँच गर्नको लागि फार्मेसीहरू भौतिक रूपमा जाने आवश्यक छैन। त्यहाँ विश्व मा धेरै tianeptine आपूर्ति विक्रेताहरु छन्, तर सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले राम्रो पाउनु हुन्छ।
यो Tianeptine आपूर्ति एक भौगोलिक स्थानमा सीमित छैन किनकि अनलाइन विक्रेताको बहुमतले विदेशमा पनि वितरण गर्दछ। जहाँसम्म, तपाइँले कुनै पनि अर्डर अनलाइन गर्नु अघि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ टियान्टेप्टिन सोडियम नूट्रोपिक स्रोतलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। कसरी विक्रेता संचालित गर्छ भनेर बुझ्नको लागि आफ्नो अनुसन्धान गर्नुहोस्। यसको शीर्षमा, धेरै डिलरहरूले तपाईंलाई क्रेडिट कार्डको साथ टियान्टेप्टिन सोडियम खरीद गर्न अनुमति दिनेछन्, र त्यो सुविधाको मामलामा राम्रो सम्झौता हुनेछ। यदि तपाईं लामो अवधिको लागि लागूपदार्थ प्रयोग गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं टिआनेप्टिन सोडियम बल्क पनि खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। औषधि लिनु अघि, चिकित्सा सल्लाहकारबाट सहि प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त गर्न नबिर्सनुहोस्। Tianeptine मनोरन्जनबाट टाढा रहनुहोस् किनकि यसले व्यसन वा गम्भीर साइड इफेक्टहरू निम्त्याउँछ।
Gassaway, MM, Rives, ML, Kueuegel, AC, Javitch, JA, & Sames, D. (२०१))। Atypical antidepressant र neurorestorative एजेंट tianeptine एक μ-opioid रिसेप्टर एगोनिस्ट हो। अनुवाद मनोचिकित्सा, 4(7), e411।
बाकोटा, EL, Sands, WC, ग्रे, TR, Oleske, DA, र Hines, MO (२०१))। संयुक्त राज्य अमेरिकामा टियान्टप्टिन संलग्नको मृत्युको रिपोर्ट। विश्लेषणात्मक विष विज्ञानको पत्रिका, 42(7), 503-509।
साम्युएल्स, बीए, नौटियाल, केएम, क्रुगेल, एसी, लेभिंस्टीन, एमआर, म्यागालाong्ग, भीएम, गसावे, एमएम, ... र जाविच, जेए (२०१ 2017)। Antidepressant tianeptine को व्यवहार प्रभाव को mu-opioid रिसेप्टरको आवश्यक पर्दछ। नियोपोस्साइफेरोमोलोजी, 42(10), 2052।
बुरिडी, KR (२०१ 2013) थान मा tianeptine सोडियम को परख र यसको मार्केटिंग योगांकन निकासी दृश्य स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री द्वारा। औषधि विधि, 4(1), 30-32।
१.टीआनेप्टिन सोडियम के हो?
२.Tianeptine सोडियम इतिहास / पृष्ठभूमि
H.तीन्याप्टिन सोडियमले कसरी काम गर्दछ?
T. कसरी टियानप्टिन सोडियम प्रयोग गर्ने?
T.Tianeptine सोडियम बनाम सल्फेट
6.Tianeptine सोडियम साइड इफेक्ट
I. त्यहाँ टियानिप्टिन सोडियमको लत सम्भावना छ?
I.Is Tianeptine सोडियम कानूनी छ?
9.Tianeptine सोडियम मतभेद
10. Tianeptine सोडियम बिक्रीको लागि